अब म प्रधानमन्त्री भए भने नेपाल युरोप भन्दा विकसित हुन्छ : डा. भट्टराई - News20 Media
January 2, 2020 N20LeaveaComment on अब म प्रधानमन्त्री भए भने नेपाल युरोप भन्दा विकसित हुन्छ : डा. भट्टराई
काठमाडौं -: प्रचण्ड–बाबुराम एक समयको चर्चित जोडी हो । तर पछिल्लो समय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराई विपरित दिशामा रहेका छन् । भट्टराईले आफ्नो पार्टी काठमाडौंको मःम पसल जस्तो नभएको बताउँनु भएको छ । बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूराना पार्टीहरु भन्दा पार्टी फरक रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो,हामीलाई तपाईहरु काठमाडौमा खोलिएका १० वटा पसलमा अर्को थपिएर ११ औं बने जस्तो होइन ।
मःम पसल थपिए संस्था बढ्ने हो ।तर टेस्ट पुरानै । हाम्रो पार्टी त्यो होइन। नयाँ टेस्टसहित हो ।एक फरक प्रशंगमा अहिलेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पुर्ण रुपमा असफल भएको ब्याख्या गर्नुभएको छ । दुई तिहाइको सरकारबाट जनताले आशा गर्ने कुनै ठाउँ नभएको भन्दै जनताको पक्षमा कुनै काम गर्न नसकेकाले यो सरकारबाट आशा गर्नु व्यर्थ हुने दाबी गर्नुभयो ।
सरकार बनेको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दा समेत कुनै काम हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘अब यो सरकारबाट के आशा गर्ने, यो सरकारको काम देखेर राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि सरकारबाट बाहिरियो । संघीय समाजवादी फोरम पनि त्यही बाटोमा छ । केही गर्छ कि भन्ने सबैको आशा सरकारले गलत साबित ग‍र्यो ।’ संयोजक भट्टराईले विप्लव नेतृत्वको माओवादीले लिएको बाटो गलत भएको स्पष्ट पार्नुभयो
चितवन : पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संविधानमा लेख्दैमा सबै कुरा आफै पूरा नहुने बताएका छन् । संविधानमा लेखेर मात्र त्यसको मर्म पूरा नहुने उनले धारणा राखे । बिहीबार पूर्वी चितवनको टरौलीमा आयोजित नेपाल कृषि सहकारी संघ लिमिटेडको १२ औं वार्षिक साधारण सभा तथा तालिम भवन उद्‍घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले संविधानमा लेखेअनुसार आवश्यक कानुन संसोधन गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको विकासका लागि उत्पादन प्रक्रियालाई तल्लो तहबाट राम्रो गर्न नसके उपलब्धि हाँसिल गर्न नसकिने बताए ।’संविधानमा लेख्दैमा आफसेआप सबै ठिक भइहाल्छ भन्ने कुरा छैन, ‘दाहालले भने, ‘राम्रा कुरा लेख्दैमा संविधान आफै लागू हुँदैन, त्यसका लागि हामीले काम गर्नुपर्छ।’
उनले सहकारी आन्दोलन मुलुकको अर्थतन्त्र विकासका लागि अपरिहार्य तत्व भएको बताए । किसानको जीविका र पेशालाई मर्यादित बनाएर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरता बनाउन सकिने बताए । नेपालको संविधानले नै तीनखम्बे नीति आवश्यक काम नगरे उद्देश्य पूरा नहुने उनले बताए। ‘ नेपालको आर्थिक विकासको मार्ग तीनखम्बे नीतिमा परिभाषित छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक, सरकारी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यबाट मात्रै नेपालको आर्थिक विकास सन्तुलितरुपले अगाडि बढाउन सकिन्छ। ‘